ESI GBANWEE AKARA EDEREDE NA OKWU - OKWU - 2019
Gbanwee ederede akara na MS Word akwụkwọ
Adobe nwere ngwaahịa ọ bụla ị chọrọ nke nwere ike ịchọrọ ka ị na-arụ ọrụ na faịlụ PDF. E nwere nnukwu ngwaọrụ na ọrụ, site na ọgụgụ nkịtị, iji chekwaa ọdịnaya. Anyị ga-atụle ihe niile n'isiokwu a. Ka anyị gbadaa na Adobe Acrobat Pro DC nyocha.
Mepụta faịlụ PDF
Acrobat na-enye ọ bụghị naanị ngwaọrụ maka ịgụ na ịdezi ọdịnaya, ọ na-enye gị ohere ịmepụta faịlụ nke gị site na ịpụta ọdịnaya site na ụdị ndị ọzọ ma ọ bụ na-agbakwụnye ederede na ihe oyiyi gị. Na menu popup "Mepụta" Enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịmepụta site na ịbịpụta data sitere na faịlụ ọzọ, na-ezipụ na clipboard, nyocha ha ma ọ bụ ibe weebụ.
Na-edezi oru ngo
Ikekwe ọrụ kachasị mkpa nke usoro ihe omume ahụ bụ ajụjụ ederede PDF. Nke a bụ setịpụrụ ngwaọrụ nke ngwaọrụ na ọrụ dị mkpa. Ha nile nọ na windo dị iche, ebe akara ngosi nke akara ngosi dị n'elu, site na ịpị nke ga-emepe usoro mbido ọtụtụ nhọrọ na nhọrọ dị iche iche.
Acrobat Pro DC na-arụ ọrụ nke Adobe Acrobat Reader DC, ya bụ na ọ na-enye gị ohere ịgụ faịlụ ma rụọ ọrụ ụfọdụ na ha. Dịka ọmụmaatụ, eziga ka ebipụta, site na ozi, ịbịgharị, ịchekwa na igwe ojii dị.
A na-enye nlezianya anya iji gbakwunye mkpado ma gosipụta akụkụ ụfọdụ nke ederede. Onye ọrụ ahụ ga-ezipụta akụkụ nke ibe ebe ọ chọrọ ịhapụ edetu ma ọ bụ achọrọ ka ịhọrọ akụkụ nke ederede maka agba agba na agba ọ bụla dịnụ. Mgbanwe ga - anọgide na - enwe ike ịhụ ya niile ndị nwe faịlụ a.
Ọgaranya mgbasa ozi
Ahịa bara ọgaranya bụ atụmatụ a kwụrụ ụgwọ na otu n'ime mmelite ọhụrụ. Ọ na-enye gị ohere ịgbakwunye ụdị 3D, bọtịnụ, ụda na ọbụna SWF faịlụ gị. A na-eme ihe ndị a na windo dị iche. Mgbanwe ndị a ga - arụ ọrụ mgbe a ga - azọpụta gị ma ga - anọgide na - egosipụta mgbe ị na - ele akwụkwọ ahụ anya.
Nbanye Nbanye ID
Adobe Acrobat na-akwado ikwekọrịta na ndị isi akwụkwọ ikike na kaadị smart. A chọrọ nke a maka inweta ntinye aka dijitalụ. Na mbido, ịkwesịrị ịrụ ebe ahụ, ebe windo mbụ gosipụtara otu mbipute nke ngwaọrụ dị na ngwaahịa ma ọ bụ okike nke ID ọhụrụ dijitalụ.
Ọzọ, onye ọrụ na-agagharị na menu ọzọ. A choro ka o soro ntuziaka na ihuenyo. Iwu ndị a kọwara dị ka ọkọlọtọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị ntinye aka dijitalụ mara ha, mana maka ndị ọrụ ụfọdụ, ntụziaka ndị a nwekwara ike ịba uru. Mgbe ntọala ahụ zuru oke, ịnwere ike ịgbakwunye mbinye aka gị nke ọma na akwụkwọ ahụ.
A na-arụ ọrụ nchedo faịlụ site na iji ọtụtụ algọridim dị iche iche. Nhọrọ kachasị mfe bụ ntọala mbụ nke paswọọdụ ịnweta. Otú ọ dị, iji kpuchie ọrụ na-enyere aka ịgbanwe ma ọ bụ jikọọ akwụkwọ. A na-eme ntọala niile na windo dị iche. A na-emeghe ọrụ a mgbe ị zụrụ ngwà zuru ezu nke usoro ihe omume ahụ.
Na-ezipụ na nsuso faịlụ
A na-eme ihe ka ukwuu n'ịntanetị iji Adobe Cloud, ebe a na-echekwa faịlụ gị ma ha nwere ike iji ya mee ihe site na ndị mmadụ kpọmkwem. A na-eziga ọrụ ahụ site n'ịkwado ya na ihe nkesa ma na-eke njikọ njikọ pụrụ iche. Onye na-ezipụ nwere ike ịdebe ihe niile omume ya na akwụkwọ ya.
Lezienụ anya iji melite ogo nke nyocha. Na mgbakwunye na arụmọrụ dị iche iche, enwere otu ngwá ọrụ na-adọrọ mmasị. Njikwa ederede ga-enyere aka ịchọta ihe ederede na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onyinyo ọ bụla. A ga-egosipụta ederede a na windo dị iche, enwere ike depụta ya ma jiri ya na otu ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ.
E nwere asụsụ Russian;
Akwa ọtụtụ ọrụ na ngwaọrụ;
Nchịkọta dị mfe na nke na-enweghị mgbagha;
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ nile ka ekpochire na mbipụta ikpe ahụ.
N'isiokwu a, anyị nyochachara ihe omume Adobe Acrobat Pro DC. Ọ bara uru maka ihe ọ bụla omume na faịlụ PDF. Na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ị nwere ike ibudata mbipute ikpe. Anyị na-ekwusi ike na ị gụọ ya tupu ịzụta zuru ezu.
Esi ehichapụ ibe na Adobe Acrobat Pro Adobe Acrobat Reader DC Esi edezi PDF pdf na Adobe Reader Adobe Flash Builder
Adobe Acrobat Pro DC bụ usoro maka ịgụ, idezi na ịmepụta faịlụ PDF site na ụlọ ọrụ a ma ama. Akụrụngwa a na-enye ndị ọrụ niile ọrụ na ọrụ ndị dị mkpa bụ ndị ọ ga-adị mkpa n'oge ọrụ.
Sistemụ: Windows 7, 8, 10
Onye Mmepụta: N'elu